Published March 29, 2021 at 9:44 PM CDT
Dadka degan Degmada Woodbury waxay bilaabi karaan inay isdiiwaan geliyaan xarumaha soo socda ee talaalka COVID-19 berri 3:00 galabnimo. Xarumaha caafimaadka waxaa loo qorsheeyay Talaado, Abriil 6th, iyo Khamiista, Abriil 8th Xarunta Siouxland Expo Center. Balanqaadyadu waxay u furnaan doonaan dhammaan dadka deegaanka ee jira da'da 16 iyo wixii ka weyn ee u baahan qiyaasta ugu horreysa ee tallaalka. Xarumaha caafimaadku waxay isticmaali doonaan tallaalka Pfizer. Waxaad iska diiwaan gelin kartaa khadka tooska ah Websaydhada Waaxda Caafimaadka Degmada Siouxland ee siouxlanddistricthealth.org laga bilaabo 3:00 P.M. berri galab.
Saraakiisha ayaa dib u helay meydka arday ka tirsan Jaamacadda Iowa State University oo la la'aa kadib markii ay qalibantay dooni ay saarnaayeen shaqaalaha iskuulku xilli ay tababar ku qaadanayeen harada. Shilka ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay arday kale oo ka mid ahaa shaqaalaha diyaaradda
Ardaydu waxay tababar ku qaadanayeen shalay subixii Little Wall Lake ee degmada Hamilton markii qoloftu rogmatay. Seddex ayaa la badbaadiyey iyadoo koox quusis ah ay soo heleen meydka hal arday goor dambe oo maalintaas ah. Lama shaacin magacyada ardayda.
Dadka degan Iowa ee kuyaala 515 iyo 319 lambarrada aagagga ah dhawaan waxay u baahan doonaan inay la qabsadaan garaacista 10-ka lambar ee lambar taleefan ah markay wacaan. Guddiga Isgaarsiinta Federaalka wuxuu weydiisanayaa dadka soo wacaya Iowa inay bilaabaan inay garaacaan nambarka aagga iyo lambarka taleefanka markii ay wacayaan laga bilaabo Oktoobar 24. Khadka Tooska ah ee Kahortaga Ismiidaaminta.
Local News LocalnewsSomaliHalima Osman